Toreo averina foana
« Maizin-tsy hariva ny androko eto, ny tany hitodiako tsy tazako, hatreto.? Ny lalan-kodiaviko lavitra loatra... Maizin-tsy hariva ny androko eto, maizina antoandro ka lasa ny sento. » hoy Ikaloyna Vony tamin’ny taona 2015. Maro ny zava-mahaontsa ity mpanoratra. Iray amin’ireny ity noraketiny antsoratra ity ka averina matetika eo amin’ny rindrin’ny kaonty facebookiny.
Tiavo ilay vehivavy
Ny 8 marsa dia andro natokan'ny Firenena Mikambana hahatsiarovana manokana ny vehivavy. Ho fahatsiraovana ny tolona nataon'ny vehivavy hizaka zo toy ny lehilahy. Nanomboka ny taona 1977 ny datin'ny 8 marsa no raikitra ho andro natokana ho an'ny vehivavy. Indro tononkalo iray nosoratana vehivavy manana ny lazany no indramintsika hanamarihana izany andro izany.
Malaso Madagascar 2
Bitsiky Ny Kanto il y a 4 années
On connaissait les films qui tirent leurs inspirations de la conquête de l’ouest américain, le célèbre Far-West. MIP, Madagascar Island Pictures, veut transformer l’existence des malaso dans le sud profond de Madagascar en filon.
Ny 28 fevrie dia natokana ho andro iray tsy ikirakirana Facebook. Maro no milaza fa sarotra izany ho an'ireo efa zatra mampiasa io tambazotra fiseraserana io. Betsaka kosa no milaza fa tsy olana no manao izany raha indray andro monja. Manana ny fijeriny io tambazotra io ny mpikanto mirahavavy.
Kolom-pe sy kolom-b...
Manana ny "danse du ventre" ry zareo Indanina. Manana ny "danse du ventilateur" ry zareo Afrikanina. Dia isika manana ny antsika araka ny voalazan'ity tononkalo ity. Saingy tsy maintsy toavina ve satria be mpanaraka ? Tena diso lalana kosa e.
Hitady ny very
Ny 21 fevrie na febroary dia natokana hitodihana manokana amin'ny tenin-dreny. Misy ny tenin-dreny efa marefo ka mila ho very. Mandraisa anjara hamelona ny anao.